Mediazụta mgbasa ozi n'ịntanetị adịghị ka ịzụ matarasị. Onye na-eri ihe nwere ike ịhụ akwa ụra n’otu ụlọ ahịa nke ha chọrọ ịzụ, n’amaghị na n’ụlọ ahịa ọzọ, otu ihe ahụ bụ ego dị ala karị n’ihi na ọ dị n’aha ọzọ. Ọnọdụ a na-eme ka o siere onye zụrụ ya ike ịma kpọmkwem ihe ha na-enweta; otu ihe ahụ maka mgbasa ozi n'ịntanetị, ebe a na-azụta ma ree ma weghachite nkeji
Tọzdee, Ọktoba 22, 2015 Fraịde, Ọktọba 23, 2015 Douglas Karr
Mgbasa ozi Dijitalụ ga-abụrịrị mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị elu na 2016 dịka comScore. Nke ahụ na-emekwa ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha maka igwu wayo. N'ezie, dị ka akụkọ ọhụrụ gbasara aghụghọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmefu mgbasa ozi niile ga-ala n'iyi na aghụghọ. Distil Networks na Interactive Advertising Bureau (IAB) weputara A Digital Publisher's Guide to Measuring and Mitigating Bot Traffic, akụkọ na-enyocha taa
Ọ bụrụ na ị rụtụla ọrụ na saịtị ndị ahịa wee tinye koodu ntụgharị site na Adwords gaa na ndebiri mana ọ bụ naanị mgbe egosiputara template ahụ na njirisi ụfọdụ, ị maara isi ọwụwa nke ịkpado peeji! Mkpado bụ obere ọnụọgụ koodu weebụ nke nwere ike inye aka nye nghọta bara uru, mana ha nwekwara ike ibute nsogbu. Ọtụtụ mkpado nwere ike ime ka saịtị dị nwayọ ma zoo; na-ezighị ezi etinyere na mkpado nwere ike ịgwagbu gị n'ihe; ọ pụkwara ịbụ
Kaadị Azụmaahịa Okwu!
Thursday, July 31, 2008 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Okwu gbara blogosphere izu ole na ole gara aga na ndị na-ede blọgụ nọ na-ada ụda! Okwu bụ ngwa Java nke na-agbanwe igwe ojii mkpado gị ka ọ bụrụ ihe mara mma. Echere m na Wordle dị jụụ, mana ọ baghị uru. Taa m na-enyocha maka Sharpminds. Otu n'ime ndị folks nọ na nnọkọ ahụ, bụ Linda Watts, nyefere kaadị ya, ọ mụmụrụ ọnụ ọchị n'otu ntabi anya! Linda nwere mkpokọta ha niile (yana ụfọdụ
Shel Israel emeela m blog. Egwuregwu ahụ bụ ịkọ ihe nzuzo ise banyere onwe gị wee jikọọ mmadụ ise ọzọ ị maara ma ha ga-agwa ihe ise ị nwere ike ịmaghị gbasara ha. Ophidiophobia: Nke ahụ bụ m. Enweghi ike iguzo ha! Ekwuru m na ọ bụrụ na m daba na agwọ, m ga-atụba ụmụ m na ya ma na-eti mkpu na olulu nke nwere ike imebi iko. Onweghi ihe m ga eme na ndu m